5 Amathiphu Top For Brisbane ngu zemininingwane | Londoloza Isitimela
Ikhaya > Izeluleko Zokuhamba Ngezitimela > 5 Amathiphu Top For Brisbane ngu zemininingwane
Brisbane indawo enhloko-dolobha yaseQueensland futhi ubusiswa ngomkhulu A-uhlu ezikhangayo efana Sea World, utshani esihle gadi South Bank, futhi Indaba Ibhuloho futhi abaningi abengeziwe - lase-Australia okude kakhulu cantilever kwebhuloho.
Kuphinde kube idolobha okudala, nge art iminyuziyamu kanye zemibukiso futhi amathilomu Chic aplenty, plus kungcono zithuthukisa ephelele Gold Coast amabhishi, ulwandle, futhi Surf.
Uma ungumuntu ngokwengxenye ukuqeqesha travel, ojantshi kusisekelo emzini sika nengqalasizinda yezokuthutha namasiko umlando.
Ngakho uma ufuna ukubona Brisbane ngesitimela, nazi amathiphu emihlanu phezulu.
Kutholwe ku North Coast umugqa, Isiteshi Central lingumuzi lwenethiwekhi esiteshini main futhi ikhona bang enhliziyweni enkabeni yedolobha Brisbane sika.
Kuvulwe emuva 1889, olungaphambili lwesonto yayo zakudala engama Anzac Square futhi umfula oyinhloko emizileni ukukhonza eQueensland lonke Australia.
Uma ungathanda zokuhlala eduze, Oaks Charlotte Towers Ihhotela kuyinto Pick kakhulu - akusiwona prohibitively ezibizayo futhi Suites okuphuma phambili ezibheke skyline idolobha.
Brisbane Metro akakabi tekusebenta - kodwa mass uhlelo zokuthutha umphakathi ngokushesha uxhaso ngokugcwele, kuqalwe ukwakha ngomfutho kulo nyaka futhi kufanele ukuvula emphakathini by 2023.
Ngezinye 21 angu eside, ke uzoba ukukhonza 18 iziteshi lonke idolobha izakhamizi futhi izivakashi ngokufanayo uzokwazi hop futhi njengolunye abayithandayo.
It kubiza A $ 944 izigidi ezingu, kodwa izinzuzo zihlanganisa ukuminyana encishisiwe nokucindezelwa encane amabhasi Brisbane owayekhungethwe izinkinga.
Steam zemininingwane ngeSonto
Uma ufuna ukuvunguza kusukela esikhathini esidlule (ngezindlela ezingaphezu kweyodwa), ikhanda eBrisbane sika Roma Street Station avamile Steam zemininingwane ngeSonto umcimbi.
Isinyathelo ngaphakathi yokunyathela enesizotha namakalishi sokhuni uzothokozela uyiswe emuva enkathini nenhle ngaphezulu, njengoba wena ukubugojela nomndeni wakho kanye esidlule Brisbane sika kakhulu ebabazekayo izindawo.
Akuve kumnandi bonke ubudala, kodwa izingane futhi asebekhulile ikakhulukazi bethatheka izintelezi yayo.
I Amashabhu Rail Museum
Ipswich iseningizimu-ntshonalanga Brisbane namaphethelo futhi lapho uzothola emangalisayo Amashabhu Rail Museum.
Kuba exhumana ugqozi ifa isipiliyoni lungaphansi endala ujantshi workshop e-Australia futhi igcwele ezingavamile umusi amakhanda, omkhulu imishini ezimbonini, nasebenzisa izindlela eziningi zokuxhumana ziphephile.
Uma ufuna i uhambo kwezemfundo futhi sijatshulelwe yibo bonke umndeni, ubhekisise.
Brisbane sezindiza kuyinto ezokuthutha ihabhu matasa lokho ngomfutho amathilomu like Fonzie Abbot, Amabha efana Transit Tavern futhi yokupaka abahlinzeki efana Looking4.com.
Kodwa bamazwe abaningi Abafika ngezindiza emoyeni, into engcono ngawo AirTrain, le 13 ikhilomitha somhambi wesitimela esingathuthukiswanga masishane spiriting abahambi kusukela sezindiza kuya Central Station kusukela 2001.
Ngemva kohambo lwendiza lwamahora kuyakhathaza, AirTrain ithwala wena enkabeni yedolobha nje 20 imizuzu - pretty umxhwele.
Landela amathiphu ethu ezinhlanu lokuzula Brisbane ngesitimela futhi uzoba uhlale ithrekhi okwesikhathi oncomekayo iholide.
Ingabe unayo amathiphu Brisbane isitimela sokuvakasha? Yabelana nabo esikhaleni sokuphawula futhi uma kudingeka isitimela Londoloza A isitimela.
Ingabe ufuna ukushumeka kokuthunyelwe kwebhulogi ungene kusayithi lakho, ungakwazi noma ukuthatha izithombe zethu nombhalo bese nje ukusinika credit ne isixhumanisi kulokhu okuthunyelwe ibhulogi, noma chofoza lapha: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/tips-brisbane-train/ - (Skrolela phansi kancane ukubona Shumeka Ikhodi)
#brisbane #railtips australia Brisbane by train amathiphu isitimela